Home » Toerana fitsangatsanganana » Holanda dia mahita ny fiakaran'ny turista avy any India
Ny Netherlands dia nandrakitra fitomboana 27 isan-jato ny fahatongavan'ireo tonga avy tany India tamin'ny 2017 ary hatramin'ny Mey 2018 dia nahitana karana 67,000 nitsidika.
Ny Netherlands dia nandrakitra fitomboana 27 isan-jato ny fahatongavan'ireo tonga avy tany India tamin'ny taona 2017 ary hatramin'ny Mey 2018. Ny tany holandey dia nahita karana 67,000 nitsidika ny fahitana maro ny firenena.
Ny iraka fivarotana tanàna telo amin'ny herinandro ho avy izao any Delhi, Mumbai ary Bengaluru dia mety hampiroborobo kokoa ireo laharam-pizahan-tany ireo, rehefa hifanerasera amin'ireo masoivoho 100 isaky ny tanàna ny mpamatsy.
Sanjeet, solontenan'ny India momba ny fizahantany Netherland, dia nilaza fa ny tanàna lehibe sy ny tsenan'ny feeder dia mandray anjara amin'ny fahalianana sy ny fitomboana, ary koa ny indostrian'ny MICE sy ireo fizahan-tany hafa. Betsaka ny zavatra azo atolotra ho an'ny sokajin-taona rehetra, hoy izy. nanipika fa ny fianakaviana sy ny vondrona kely dia mampiseho fahalianana ihany koa amin'ny Netherlands.
Ny iraka varotra dia misy fisarihana samihafa sy toeran-kaleha, ary koa KLM Royal Dutch Airlines, izay mpilalao lehibe sy an-trano ao India.
Ny institiota fitantanana hotely any New Delhi dia mampiroborobo ny fitantanana kalitaon'ny sakafo vegetarian